Global Voices teny Malagasy » Tongava Manatevina Laharana ny #RightsCon Tunis Translation Lab: Antso ho an’ireo miteny Arabo, Frantsay ary Espaniôla · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Mey 2019 12:41 GMT 1	 · Mpanoratra Wafaa Heikal, Meedan Nandika avylavitra
Ny RightsCon Tunis 2019  dia hetsika faha-8 ao anatin'ireo Andianà Vovonana RightsCon. Izy ity no iray amin'ireo kaonferansa sangany eran'izao tontolo izao momba ny zon'olombelona ao anatin'izao tontolo dizitaly izao, miaraka amin'ireo adihevitra sy veladreseaka tena mifanandrify amin'izany sy manandanja manerana izao tontolo izao. Mitady mpandikateny mpirotsaka an-tsitrapo izahay ka afaka miteny Arabo, Frantsay ary Espaniôla mba hitondra fanohanana amin'ireo ezaka maromaro fandikàna ho an'ny Rightscon  ny 11 hatr@ 14 Jona ao Tunis.
Tany amboalohany, i Meedan  dia mpandray anjara tato amin'ny Global Voices Lingua , Access Now , sy ny Localization Lab  mba hamokatra ny RightsCon Translation Lab.
Nandritra ny fibitsihana mivantana ny kaonferansa tamin'ny 2017 natao tao Bruxelles, nahadika bitsika niisa 127 ho amin'ny teny Arabo izahay, ary 568 ho amin'ny teny Frantsay, 286 ho amin'ny teny Espaniôla.  Ny sasany tamin'ireo mpandika dia niasa ho amin'ny fandikàna mihoatra ny tenimpirenena iray.
Tamin'ny 2018 izahay – donakely ho an'ireo mpandika goavana ato aminay – nahadika bitsika 324 ho amin'ny teny Espaniôla, 271 ho amin'ny teny Frantsay, ary 251 ho amin'ny teny Arabo . Ny tarika mpandika ho amin'ny teny Espaniôla dia notarihan'i Juan Arellano , ho an'ny teny Frantsay dia i Suzanne Lehn  ‏ary ny ekipa ho an'ny teny Arabo dia notarihan'i Mohamed ElGohary , samy avy amin'ny Global Voices avokoa.
Mialoha ny kaonferansa , hanokana ampahany amin'ny fotoanany ireo mpirotsaka an-tsitrapo mba hahazo atrikasa fiofanana momba ny fomba fampiasàna ilay fampiharana (app), no sady miaraka miasa hatrany amin'ny tarik'i Meedan  mba hifankahazatra amin'ny Bridge .
Raha toa ianao ka mpandika miasa amin'ny teny Arabo, Frantsay na Espaniôla ary maniry ny hitondra fanohanana ity hetsika fandikàna ity, miangavy anao hameno ito fisoratana anarana  ito. Raha toa ianao te-hahafantatra misimisy kokoa momba ny fomba ahafahanao manatevina laharana, mifandraisa amin'i Noha Daoud noha@meedan.com  or Wafaa Heikal wafaa@meeda.com .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/28/139365/
 Ny RightsCon Tunis 2019: https://www.rightscon.org/
 nahadika bitsika niisa 127 ho amin'ny teny Arabo izahay, ary 568 ho amin'ny teny Frantsay, 286 ho amin'ny teny Espaniôla.: https://community.globalvoices.org/2017/03/rightscon-brussels-2017-translation-lab/
 bitsika 324 ho amin'ny teny Espaniôla, 271 ho amin'ny teny Frantsay, ary 251 ho amin'ny teny Arabo: https://community.globalvoices.org/2018/09/rightscon-translation-lab-2018-how-we-did-it-and-what-we-learned/
 fisoratana anarana: https://meedan.typeform.com/to/OBjxUJ